Vaovao - Ahoana no hiarovana ny tenanao sy ny hafa
Ahoana no hiarovana ny tenanao sy ny hafa
Fantaro ny fiparitahany
1. COVID-19 dia miely mora foana amin'ny olona tsirairay, amin'ny alàlan'ireto làlana manaraka ireto indrindra:
2. Eo anelanelan'ny olona mifanerasera akaiky (ao anatin'ny 6 metatra).
3. Amin'ny alalàn'ny vongan-tsofina vokarina rehefa mikohaka, mievina, miaina, mihira na miresaka ny olona iray voa.
4. Ny vongan-tsofina mahavelona dia miteraka areti-mifindra rehefa tsofokaina na apetraka amin'ny fonon'ny moka, toy ireo izay mitsivalana ao anaty ny orona sy ny vava.
5. Ireo olona tratry ny aretina nefa tsy manana soritr'aretina dia afaka manaparitaka ny viriosy amin'ny hafa koa.
Fomba tsy dia mahazatra loatra COVID-19 afaka hiparitaka
1. Amin'ny toe-javatra sasany (ohatra, rehefa any amin'ny toerana mihidy sy tsy dia tsara rivotra ny olona), COVID-19 dia mety hiparitaka indraindray amin'ny alàlan'ny fifindran'ny rivotra.
2. Ny COVID-19 dia miparitaka kely kokoa amin'ny alàlan'ny fifandraisany amin'ireo faritra maloto.
sary famantarana fanasana tanana
1. Sasao amin'ny savony sy rano matetika ny tananao mandritra ny 20 segondra, indrindra rehefa avy teny amin'ny toerana be olona ianao, na rehefa avy notsofina ny oronao, mikohaka na mievina.
2. Ilaina indrindra ny manasa:
3. Alohan'ny hihinanana na hanomanana sakafo
4. Alohan'ny hikasihana ny tavanao
5. Rehefa avy nampiasa ny trano fidiovana
6. Rehefa avy nandao toeram-bahoaka
7. Rehefa avy nitsoka ny oronao, mikohaka na mievina ianao
8. Aorian'ny fikirakirana ny saron-tava
9. Aorian'ny fanovana diaper
10. Rehefa avy mikarakara olona marary
11. Rehefa avy nikasika biby na biby fiompy
12. Raha tsy mora azo ny savony sy rano dia ampiasao saniteratera misy tanana misy alikaola 60% farafaharatsiny. Sarony ny faritra rehetra eny an-tananao ary kosohy miaraka mandra-pahatonga azy ireo ho maina.
13. Aza mikasika ny masonao, ny oronao ary ny vavanao amin'ny tanana tsy voasasa.
olona zana-tsipìka zana-tsipìka
Aza mifandray akaiky
1. Ao an-tranonao: Aza mifanerasera amin'ny olona marary.
2. Raha azo atao dia tazomy ny tongotra 6 eo anelanelan'ny olona marary sy ny olona ao an-trano.
3. Any ivelan'ny tranonao: asio elanelam-potoana 6 metatra eo anelanelanao sy ireo olona tsy mipetraka ao amin'ny ankohonanao.
4. Tsarovy fa ny olona sasany tsy manana soritr'aretina dia mety ho afaka manaparitaka virus.
5. Mijanona farafahakeliny 6 metatra (halavan'ny sandry 2) amin'ny olon-kafa.
6. Ny fitazonana ny elanelana amin'ny hafa dia zava-dehibe indrindra amin'ireo olona atahorana ho marary mafy.
kisary jiro mason-doha
Sarony sarontava ny vavanao sy ny oronao rehefa manodidina ny hafa
1. Ny sarontava dia manampy anao tsy hahazo na hanaparitaka ilay virus.
2. Azonao atao ny manaparitaka ny COVID-19 amin'ny hafa na dia tsy mahatsiaro marary aza ianao.
3. Ny olon-drehetra dia tokony hisaron-tava amin'ny toerana ampahibemaso ary rehefa manodidina ny olona tsy mipetraka ao an-tranonao, indrindra rehefa sarotra ny mitazona ny fepetra lavitra momba ny fiaraha-monina.
4. Ny sarontava dia tsy tokony hapetraka amin'ireo zaza latsaky ny 2 taona, na iza na iza sahirana miaina, na tsy mahatsiaro tena, tsy afa-miasa na tsy afaka manala ny sarontava raha tsy misy fanampiana.
5. AZA mampiasa sarontava natao ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana. Amin'izao fotoana izao, ny sarontava fandidiana sy ny respirator N95 dia famatsiana kritika izay tokony hatokana ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana sy ireo mpamaly voalohany.
6. Tohizo mitazona eo amin'ny 6 metatra eo anelanelan'ny tenanao sy ny hafa. Ny maska ​​dia tsy mahasolo ny halaviran'ny fiaraha-monina.
sary famantarana jiro boaty
Sarony kohaka sy mievina
1. Sarony tavy foana ny vavanao sy ny oronao rehefa mikohaka ianao na mievina na mampiasa ny atin'ny kiho fa tsy mandrora.
2. Atsipazo ao anaty fitoeram-pako ireo sela efa niasa.
3. Sasao avy hatrany amin'ny savony sy rano ny tananao mandritra ny 20 segondra. Raha tsy mora hita ny savony sy rano dia diovy amin'ny tanana ny tananao izay misy alikaola 60% farafaharatsiny.
Madio sy mamono otrikaretina
1. Madio ARY mamindra otrikaina matetika voakasik'izany isan'andro. Tafiditra ao anatin'izany ny latabatra, vavahady fidirana, vavahady jiro, countertops, kitapo, latabatra, telefaona, kitendry, trano fidiovana, faucet ary sink.
2. Raha maloto ny faritra dia hadio. Mampiasà detergent na savony ary rano alohan'ny famonoana otrikaretina.
3. Avy eo, mampiasa disinfectant ao an-trano. Ny kisary famoahana otrikaretina famoahana otrikaretina EPA mahazatra indrindra dia miasa.
sary famantarana hazavana eo amin'ny loha
Araho maso ny fahasalamanao isan'andro
1. Mitandrema amin'ny soritr'aretina. Jereo ny tazo, kohaka, sempotra, na soritr'aretina COVID-19 hafa.
2. Zava-dehibe indrindra raha toa ka mihazakazaka manao asa tena ilaina ianao, mankany amin'ny birao na any am-piasana, ary amin'ny toerana mety ho sarotra ny mitazona ny halaviran'ny vatana 6 metatra.
3. Raiso ny maripanao raha miteraka soritr'aretina.
4. Aza maka ny maripanao ao anatin'ny 30 minitra aorian'ny fanaovana fanatanjahan-tena na aorian'ny fihinanana fanafody mety hampidina ny mari-pana, toy ny acetaminophen.
5. Araho ny tari-dalan'ny CDC raha miteraka soritr'aretina.
Arovy ny fahasalamanao amin'ity vanim-potoana gripa ity
Azo inoana fa ny viriosy gripa sy ny virus izay miteraka COVID-19 dia samy hiparitaka amin'ity fararano sy ririnina ity. Ny rafi-pitsaboana dia mety ho tototry ny fitsaboana ny marary voan'ny gripa sy ny marary COVID-19. Midika izany fa ny fahazoana vaksinin'ny gripa mandritra ny taona 2020-2021 dia zava-dehibe kokoa noho ny teo aloha. Na dia tsy miaro amin'ny COVID-19 aza ny vaksinin'ny gripa dia misy tombontsoa lehibe maro toy ny:
1. Ny vaksinin'ny gripa dia naseho fa mampihena ny loza ateraky ny aretin'ny gripa, fampidirana hopitaly ary fahafatesana.
2. Ny fahazoana vaksinin'ny gripa dia afaka mamonjy loharanom-pahasalamana ho an'ny fikarakaran'ireo marary voan'ny COVID-19.